यो '00' नम्बर को अभाव बाहेक सबै पक्षमा अमेरिकी रूले समान, युरोपेली रूले गोल्ड Microgaming क्लासिक क्यासिनो खेल अर्को एउटा छ. ग्राफिक्स को मामला मा असाधारण गुण सुविधा, ध्वनि र डिजाइन, गोल्ड श्रृंखला शीर्ष लिग गर्न Microgaming catapulted छ.
युरोपेली रूले गोल्ड खेल्ने
परिचित Roulette पाङ्ग्रा र तालिका यसको 3×12 बाट संख्या प्रदर्शन ग्रिड 1 गर्न 36 देख्न. एकल '0' सही यो ग्रिड को शीर्ष मा राखिएको छ. तपाईं घुमिरहेको चक्का को सही स्लट भाग्यशाली नम्बर मुलुकमा हुनुहुन्छ कि मा भित्र र बाहिर बाजी दुवै गर्न सक्छन्.
अतिरिक्त सट्टेबाजी विकल्प खेलाडी लागि उपलब्ध Neighbour शर्त र शर्त कल छन्. तपाईं एक नम्बर चयन र को कुल सम्म यसको आसन्न संख्या संग यो एक सीधा शर्त बनाउन सक्छ9संख्या (या त पक्षमा चार). शर्त कल गर्ने Roulette पाङ्ग्रा को एक खण्ड मा एक शर्त स्थानहरूलाई.
भित्र बाजी एक नम्बर वा तलको छ सम्भव संयोजन को कुनै पनि गरिएका छन्
• एक नम्बर मा सीधा बेट -Bet, 35:1 payout
• विभाजन बेट- आसन्न संख्या मा शर्त, 17:1 payout
• सडक बेट – मा शर्त3एक पंक्ति मा संख्या, 11:1 payout
• कुना बेट - को एक ब्लक मा शर्त4संख्या, 8:1 payout
• पाँच नम्बर बेट - मा शर्त5संख्या (0, 00, 1, 2, 3), 6:1 payout
• रेखा बेट – मा शर्त6को संख्या2आसन्न पङ्क्तिहरू, 5:1 payout
ग्रिड बाहिर ब्लक को कुनै पनि आफ्नो पैसा राख्दा बाहिर बाजी गरिन्छ.
• स्तम्भ बेट - मा शर्त 1 को3स्तम्भहरू, 2:1 payout
• दर्जन बेट - मा शर्त 12 उच्च संख्या, कम वा मध्य ब्लक, 2:1 payout
• समेत मुद्रा बेट - मा शर्त 18 संख्या (पनि, अनौठो, कालो वा रातो), 1:1 payout
पूर्ण डिजाइन, अचम्मको ग्राफिक्स, कट स्पष्ट इन्टरफेस सबै क्यासिनो खेलाडीहरू लागि तत्काल मनपर्ने बनाउन युरोपेली रूले गोल्ड. विशेषज्ञ मोड विकल्प भएको आफ्नो खेल र पैसा को राम्रो नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ. सट्टेबाजी र जितको असली thrill अनुभव गर्न प्ले यो क्लासिक सौन्दर्य.